Kateetarka caloosha ku jira
Waa maxay kateetarka Foley?
Kateetarka waa tuubo khafiif ah, dhuuban, oo badanaa ka samaysan caag cinjirka 'latex roba' ah, oo la geliyo kaadi mareenka si kaadi looga qaado. Kateetarka waxaa loo isticmaali karaa bukaannada qalliinka lagu sameynayo ama bukaannada aan is-celin karin. Marka qalabka caafimaadka loo isticmaalo, badanaa cisbitaalka ama goobaha caafimaadka, waa usua ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka tubbada silikooniga ee darajada caafimaad?
Isbitaalada bukaan socodka ee bukaan socodka guud ahaan waxay arki karaan noocyo kala duwan oo badeecado caag ah, sida tuubooyinka silikoonka caafimaadka, silingeyaasha silikoon silsiladaha ah, oo ku xiran gacmaha siligga siligga kuwan, marxaladda hadda ee goobta caafimaadka marka lagu daro daawooyinka ugu badan ee ah qalabka caafimaadka , markaa maxaa silicone p ...
Horumarinta alaabada silicone ee caafimaadka
Cinjirka silikoonku waa shey cayriin ah oo dawo ah kadib tobaneeyo sano oo adeeg caafimaad la isticmaalay, muddo dheer ayay aqoonsan tahay bulshada caafimaadku, adeegsiga shirkado badan oo waaweyn si loo sameeyo caag silikoon caafimaad oo hadaf guud u ah horumarka iyo naqshadeynta, caag silikoon caafimaad ...
Sidee loo doortaa tuubbada silikoon ee saxda ah?
Sidee loo doortaa tuubbada silikoon ee saxda ah? Marka loo barbardhigo tuubbada caagga ah ee caadiga ah, tuubbada silikoonku waxay leedahay faa'iidooyinka yareynta dhacdooyinka infekshinka iyo yaraynta xanaaqa kaadida. Kateetarka caadiga ah ee silikoonka iyo Foley silikoon kateetarka ayaa la isbarbar dhigay. Foley silsilad silikoon ...
Isbarbardhiga qalabka kala duwan ee tuubbada kaadi mareenka
Horumarinta sayniska iyo teknolojiyada casriga ah, waxaa soo badanaya noocyada qalabka kateetarka, sida silica gel, caag (latex), PVC iyo wixii la mid ah. Astaamaha tuubbada cinjirka waa dabacsanaan wanaagsan, kala duwanaanshaha guud ee xiisaddu wuxuu gaari karaa 6-9 jeer laftiisa, heerka celintana waa 10 ...
Soo bandhig khadka lagu buufiyo dhalaalka
Laga soo bilaabo Febraayo 2020, COVID-19 wuxuu si xawli ah ugu fidayaa, dalal badan oo adduunka ahna si ba'an ayaa uu u saameeyay cudurka. Shiinaha, in kasta oo xaaladda faafida la xakameeyay, khubarada qaar waxay rumaysan yihiin in heer-kulka hadda jira uu ku-meelgaar noqon karo oo keliya ...
Bishii Oktoobar 25, 2019, macaamiisha ka socda Canon Japan ayaa u yimid inay soo booqdaan shirkadeena booqashada goobaha. Alaabooyin iyo adeegyo tayo sare leh, aqoonsi iyo sumcad shirkadeed oo xoog leh, iyo rajooyinka horumarineed ee warshadaha wanaagsan ayaa ah rea muhiim ...
Shirkad ku saabsan horumarinta wax soo saarka iyo barashada
Si kor loogu qaado tayada ganacsiga shaqaalaha iyo heerka kartidooda, ku xeel dheer aqoonta iyo xirfadaha kala duwan, maahan oo kaliya in la daboolo baahiyaha maareynta mashruuca, isla mar ahaantaana shirkadu ay horumariso keyd dhameystiran oo tayo leh. Bishii Diseembar 2019, shirkaddayada ...
MEDICA, Dusseldorf, Jarmalka
Laga soo bilaabo Nofeembar 18 ilaa 21, 2019, Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd. waxay kaqeyb qaadatay "bandhigga isbitaalka caalamiga ah iyo qalabka qalabka caafimaadka" oo lagu qabtay magaalada Dusseldorf, Jarmalka. Bandhiggu waa mid caan ka ah adduunka oo caan ah ...